Download Lockheed Martin F-16 Ady Falcon menarana FS2004 - Rikoooo
Downloads 14 314
Ny F-16 Ady Falcon fiaramanidina dia multi-mpiady anjara mandroso ny Etazonia nandritra ny 1970s. Fehezin'ny mahery 20 amin'ny firenena, naorina teo ambany fahazoan-dalana any Torkia, Korea Atsimo ary ny vondrona efatra firenena OTAN, ny F-16 in 2009 dia ny mpiady ampiasaina indrindra eo amin'izao tontolo izao. 4 300th dika mitovy natolotra tamin'ny Aprily 2006  sy ny famokarana dia tokony hitohy na dia mandra-2010s ho an'ny fanondranana. (Source Wikipedia)
Ny F-16 Ady Falcon no voalohany aerodynamically fiaramanidina miovaova amin'ny famolavolana, izay manome maneuverability tsara, fa mila FBW. Amin'ny iray mahery reactor, dia bi-supersonic, sy ny rafitra afaka mandray miakatra ho 9G.
Ny cockpit dia manana zava-baovao maro manan-danja raha oharina amin'ny teo aloha mpihaza:
- Ny mpanamory ny fanaovam-panavotana dia mitongilana amin'ny 30 ° hanohitra ny entana antony
- Ny lehibe dia manome curved fitaratra tsara 360 ° tazana ny tantsambo
- Ny joystick dia napetraka azy tsy hiala, ary maro didy amin'ny HOTAS (tanana Throttle ary tsy hiala)
- Ny fisehon'ny multifunction mampiseho mora ny mamaky vaovao.
Ny F-16 Ady Falcon menarana dia awsome sy feno ary Functional! Ny zavatra rehetra dia misy, dia tsipiriany ny tsara tarehy. Download tsy am-pihambahambana.
Mihasimba Royal Air Force Danoà
Vakio ny tahirin-kevitra
Zavatra tsy fonosana Misy radara sy ny loha-up viewfinder (VTH) avy Eric Marciano, izany radara dia tsy maimaim-poana, dia tsy nanana safidy hafa noho izao payware Radar, na izany aza, dia afaka hizaha toetra azy ho 5 minitra, dia ny hafatra dia nampitandrina ianao fa mila fisoratana anarana fanalahidy. Afaka mazava ho azy mbola manidina ny F-16 nefa tsy Radar na mividy manan-danja avy ity rohy ity:
Ny Radar Tena mahafinaritra